Umatshini wokunyathela wentsimbi mveliso, abaXhasi - China Umatshini wokunyathela iintsimbi abavelisi
Metal Ukunyathela Izahlulo Lock Lock
Icandelo lokunyathela iintsimbi ngobucwebe
Metal Ukunyathela Izahlulo For Isixhobo Ekhaya
Zonke iintlobo zeenxalenye zensimbi yensimbi
Metal Ukunyathela Tooling
Ukunyathela Isixhobo seCandelo leeMoto
Ukunyathela Isixhobo seZixhobo zeSixhobo seKhaya leMetal
Izixhobo zeThuluzi lokuThengisa
Sivelisa iitshixo, iibhaksi, izibambo, izinto ze-elektroniki kunye nezinye izixhobo zekhompyutha; Izinto ezibonakalayo zibandakanya izinto ezahlukeneyo zesinyithi, ezinje nge-insimbi engenasici, iphepha elibunjiweyo, ubhedu, i-aluminium njalo njalo, ubukhulu bezinto ezivela kwi-T = 0.1mm ukuya kwi-1.0mm; Inkqubo yonyango yomphezulu ihambelana neemfuno zabathengi, ezinje nge-ukushukuma kokungcangcazela, ukwenza mnyama, ukufakela i-electroplating, ukuzoba ucingo, i-anode kunye nenye inkqubo yonyango yomphezulu.
Sivelisa izinto zentloko, izinto zentamo, izinto zentloko, izinto zokunxiba, iingqekembe zesikhumbuzo njalo njalo kunye neincinci zelizwe kunye neempawu zalapha. Iimveliso zenziwe ngobhedu, ubhedu omhlophe, intsimbi engenasici kunye nentsimbi.
Sivelisa ikakhulu zonke iintlobo zekhompyuter ezivela kubalandeli bombane, izifudumezi, umabonwakude, iikhompyuter kunye nezinye izixhobo zentsimbi, ezinje nge fan fan, isiseko, isibiyeli, iqokobhe lemoto, intonga yekhonkco, njl. I-TV, isakhelo esingaphambili, isitya sangasemva njalo njalo; Amacandelo ekhompyuter kubandakanya icala kunye nezinye izinto zepheripherali.
Ukongeza kwimveliso ephambili yezitshixo, imithwalo yemithwalo, izibambo, izixhobo zasekhaya, izixhobo zeemveliso zeemoto, inkampani ikwaye imveliso yesiko elenza izixhobo zombane, iifaskoti zokuvala, iziqwenga zokulungisa imithwalo, kunye nezinye iimveliso zehardware ngokweemfuno zabathengi.
I-Hongye yeSayensi kunye nePaki yeTekhnoloji, inombolo 359, iNdlela yezeMfundo, iDalingshan Idolophu, kwiSixeko saseDongguan, kwiPhondo laseGuangdong
Siza kuzithumela izixhobo ngokuhlola ngokungqongqo komgangatho, emva kokupakisha, siya kuya phambili kunye.